﻿Download Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – Igbo from Official Microsoft Download Center
AfrikaansAmpharicAssameseAzeri (Latin)BaskiBengali (Bangladesh)Bengali (India)CatalanDariFilipinoGalicianGujaratiHausaIgboIkinyarwandaIrishisiXhosaisiZuluKannadaKhmerKiswahiliKonkaniKyrgyzMalayalamMalteseMāoriMarathiNepaliOnye AlbaniaOnye ArmeniaOnye BelarusOnye Bosnia (Latin)Onye GeorgiaOnye IcelandOnye LuxembourgOnye Macedonia (Bubu Yugoslav Repọbliki nke Macedonia)Onye Norway (Nynorsk)Onye RussiaOnye Serbia (Cyrillic)OriyaPersianPunjabiPunjabi (Arabic, Pakistan)Quechua (Peru)Scottish Gaelic - United KingdomSesotho sa LeboaSetswana (South Africa)SinhalaTajik - TajikistanTamilTatarTeluguUyghur - ChinaUzbek (Latin)WelshWolofYoruba
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Igbo wepụtagasịrị Ihuenyo Ojiàrụ atụgharịrị maka ụmụ ntinye n'ọrụ Microsoft Office 2013 ndịa:
Site na iji Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Igbo rụọ ọrụ, ụmụ òjịarụ ga-arụ ọrụ na ezigbo nkwakọnye ụmụ vashọn asụsụ nke ụmụ ntinye n'ọrụ Office akwadoro ma lelee nyemiwu na ụmụ nhọrọ maka ụmụ ntinye n'ọrụ ndị ahụ na - Igbo.
Mgbe ana-akwakọnye Microsoft Office Language Interface Pack 2013, a ga-akọpịrị ụmụ faịlị ga-eme ka ụmụ òjịarụ gbanwee asụsụ nke ihuenyo n'ebemwèga diiski ngwaike. Emechaa nkwakọnye, Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Igbo ga-enwe ike nakwa nhọrọ azịzị dị adị sina ogige ụmụ ntinye n'ọrụ Office 2013 nakwa Ntinye n'ọrụ Mwube Asụsụ Microsoft Office 2013.
Microsoft Windows 7 - 32 maọbụ 64 bit OS
Microsoft Windows 8 - 32 maọbụ 64 bit OS
Matakwa: Biko hụ n'ịkwakọnyere ụmụ Ngwugwu Ọrụ nke ọhụrụ maka Sistèm Amaọrụ gị iji hụ maka nkwalịte nkwado maka asụsụ gị.
Ngwanrò Vashọn nke Office 2013 dabaranụ maọbụ kwụrụ onwe ya ma nwegasịa Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint maọbụ Microsoft Word maọbụ ga-akwado Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Igbo. Matakwa: Biko hụ n'ịkwakọnyere Ngwugwu Ọrụ Microsoft Office ọhụrụ maka ụmụ ngwaahịa Microsoft Office gị. Nkea ga-eme ka ị jiri ya rụọ ọrụ nke ọma.
Kọmputà na Nhàziọru Nhàziọru 1 GHz nwere nkwado SSE2 maọbụ karịa; 2 GB RAM maọbụ karịa
Ohere diiski N'ịgụnye n'ohere diiski ngwaike nke ejiri rụọ ọrụ site na ụmụ ntinye n'ọrụ Office 2013 akwakọnyere.
3 GB nke ohere diiski dị adị.
Ihe ụmụ sistèm ndịọzọ niile chọrọgasịrị bụkwa otu ihe ntịnye n'ọrụ nke Office 2013 chọrọ nke iji n'arụ ọrụ na Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Igbo.
Windows Language Interface Pack Ọ ga-aka m mma ka akwakọnye Language Interface Pack nke Windows 7 ọhụrụ maọbụ nke Windows 8 maka nkwalite nkwado asụsụ maka Sistèm Njìarụọrụ na ụmụ ntinye n'ọrụ ngwanrò.
Ụmụ mwube Ụcha ngosịpụta Mọnịtọ ad DPI Ọtụtụ ụmụ ọnụodee ka ekepụtara iji gụọ na nkwalite ụcha ngosịpụta 1366 x 768. Ọ bụrụ na i nwee nsogbu n'ịgụpụta asụsụ ọnụodee gị biko mezilite mwube ngosipụta gị n'ụcha ngosipụta a maọbụ gbalite ya elu ma ọ dị na mkpa. Biko mara: anyị kwadoro ka i jiri ụmụ ntinye n'ọrụ Office 2013 na mwube defọlt Windows DPI - 96 DPI. N'iji mwube 120 DPI nwere ike mee ka òjiarụ ghara ịrụ ọrụ nke ọma n'ụfọdụ ụmụ ntịnye n'ọrụ Office site na nkwalite ụmụ ogo ụbụbọ Office.
Rịjọnalụ na Ụmụ nhọrọ Asụsụ Na mgbakọnye a họpụtara ha na nke ha niile Rịjọnalụ na Ụmụ nhọrọ Asụsụ Na Panelụ Njizi bụgasị ntọlite na asụsụ nke Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Igbo.
I kwakọnye nbudata a:
Butùo faịlị LanguageInterfacePack.exe site na ịpịkịnye bọtịn Butùo (di n'elu) ma na-echekwa faịlị na diiski ike gị.
Pịkịnye-ugbo abụọ faịlị programụ LanguageInterfacePack.exe na diiski ike gị iji bido Nkwalite programụ.
Soro atụmatụ a nọ n'enyòngosipụta iji mechaa nkwakọnye.
Ozugbo akwakọnyere ya faịlị gụọmụ maka Microsoft Office 2013 Language Interface Pack bụ nke e nwere ike chọta na C:\_Program Files\_Common Files\_microsoft shared\_OFFICE15\_1136\_LIPread.htm.
Na mmèzilite nke Office 2010 nwere Office 2010 Language Interface Pack maọbụ edishọnụ dibu adị na Office 2013 nwere Office 2013 Language Interface Pack bụ nke akwadoghi. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị imezilite nke nkwakọnye ntọala nke Office 2010 ruo Office 2013 nwere Office 2013 Language Interface Pack i kwesiri:
Wepụ Office 2010 Language Interface Pack.
Rụọ nkwalite Office 2013 ma họrọ nhọrọ mmezilite.
Mgbe nkwalite Office 2013 mechara, kwakọnye ma hàkọọ Office 2013 Language Interface Pack.
Na-awake ngwaahịa Office gị:
Ọ bụrụ na ị na-enweta nsogbu n'ịgụ Koodù Nkwakọnye niile na "Wizaadị Mwake Microsoft Office" ụbụbọ, maọbụ nkwakọnye koodù niile agaghị egosịpụta nke ọma mgbe iji Microsoft Office Language Interface Pack 2013, biko kagbuo wizaadị ma gbanye na asụsụ ntọala ngwaahịa gị iji wakee na ngwaahịa Microsoft Office gị.
Atụmatụ maka iji rụọ ọrụ:
N'ịgbanye Ihuenyo Òjịarụ n'asụsụ nke Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Igbo, soro atụmatụ ụmụ ndịa:
Gwàkee Ụmụ Asụsụ Microsoft Office 2013 Keahọpụtara si na menu Bido\_Programmụ Niile\_Microsoft Office\_Ụmụ ngwaọrụ Microsoft Office.
Okpuru Họrọ Ngosipụta ma Nyere Ụmụ asụsụ aka, okpuru Gosipụta Asụsụ họrọ asụsụ achọrọ ma pịkịnye na Wube dịka Difọlt bọtịn.
Okpuru Họrọ Ụmụ asụsụ Ndezi, họrọ asụsụ achọrọ ma pịkịnye na Wube dịka Difọlt bọtịn.
Pịkịnye bọtịn Ọ DI MMA.
Mwube asụsụ nke ị họrọ ga-ebido n'oge ọzọ ị gbanyere ụmụ ntinye n'ọrụ Office gị.
Matakwa: Enyemaka agaghị abịa na nke Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Igbo. Enyemaka ga-anọ na naanị n'ime ezigbo asụsụ akwakọnyere.
Gosipụta enyemaka mwube gị mgbe ọbụla na ndesịta keala nọ na ntọala asụsụ.
N'iwepụ mbutù a:
Pụọ na ụmụ programụ Microsoft Office niile.
Pịkịnye-ugbo abụọ Ụmụ programụ na Ụmụ njirimara aịkọn nọ na Windows Panelụ Njizi.
Na Arụnyela maọbụ Gbanwee Programụ nhọrọ, pịkịnye Microsoft Office Language Interface Pack 2013 – Igbo na Ụmụ programụ akwakọnyere ọhụrụ igbe, mgbe ahụ họrọ nhọrọ Weghàpụ.
Soro ụmụ ntụzịaka nọ n'enyòngosipụta.